Akụkọ - Gịnị bụ 3D embossed Series?
Lihua WPC 3D Embossed Composite Decking bụ ngwaahịa teknụzụ ọhụụ, ma ọ bụ ị nwere ike ịkpọ ya nke ọma ma ọ bụ buru ibu embossed.The isi teknụzụ bụ miri embossed usoro n'oge production.When extrusion okokụre, ụkpụrụ bụ otu n'elu mbadamba.
New technology 3D embossing WPC n'èzí mma n'ala, ji achọ nkwalite. 3D embossing technology bụ agbacha agbacha usoro. Ala nke ọ bụla dị ka ihe ọkpụkpụ, na ọnọdụ nka na ogo ọhụụ adịla mma. Oge gboo 3D embossing bụ nnukwu mmụba na ala osisi-plastik a hụrụ, nke na - enweghị ike ịdegharị ya na ndị agha ma na - akwado akara nke mbido mmalite.
Woodlọ osisi na-ebu osisi 3D na-eburu 3 mm, nke nwere ike ime ka ikike iru ala dịkwuo elu. E jiri ya tụnyere ntanetị adsorption nke ntanetị nke uzo elu, ntụziaka adsorption nke 3D embossing surface ọtụtụ dị iche iche.
Uru nke 3D embossed
Omenala wpc mejupụtara decking ndị mfe ida ọka n'elu, super embossed decking ịrụ mma karịa ihe ọ bụla nkịtị mejupụtara osisi, ọ bụ ihe eke na mma, mma fading na ọkọ-eguzogide ọgwụ.
Lihua si super embossed WPC decking nwere niile uru nke ọdịnala mejupụtara decking, ọ ka na-nọ: waterproof, mgbochi UV, ihu igwe na-eguzogide ọgwụ, mgbochi corrosion, ahụhụ mgbochi, ala mmezi, ogologo ọrụ ndụ wdg. nwee mmetụta dị ka osisi nkịtị n'ihi ọgwụgwọ embossing 3D nke elu.
Companylọ ọrụ anyị nwere ọtụtụ ihe ị ga - eme maka ị ga - aga, dịka dragon osisi na osisi ripple, nke kachasị ewu ewu na ahịa. Agba agba ahaziri iche, n'agbanyeghị osisi oak, kọfị, ukpa, chocolate ma ọ bụ ihe ọzọ, anyị nwere ike imere gị otu ị chọrọ.
Nhọrọ agba nke ụlọ ọrụ Lihua WPC
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ agba niile anyị nwere ike ịnye, ọ bụrụ na ịchọrọ ịme ihe pụrụ iche, ị nwere ike zitere anyị ihe nlele gị, anyị nwere ike ịme dị ka ihe nlele gị, nke a ga-enye gị na ndị ahịa gị nhọrọ ndị ọzọ.
WPC ụlọ, osisi plastic mejupụtara decking, WPC n'èzí decking, WPC mejupụtara decking, N'èzí WPC decking, WPC decking n'ala,